You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Diseases / Psoriasis
ကြမ်းထော် သော အနီပိမ့်များ ထ သည့် အရေပြား ရောဂါ
" ဆရာမကြီး၏ ကျေးဇူးတရားကြီးမားမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အစစ်အမှန် ဗဟုသုတကိုသာ သိရပါသည်။ရောဂါတစ်ခုဖြစ်လျှင် အကြောင်းတရားကို ရှာမှသာ ပျောက်ကင်းနိုင်မည်ဟုလည်း ဆရာမကြီး၏ စေတနာ ဂရုဏာ မေတာတရား ကျေးဇူးတရားများကြောင့် အသိဉာဏ်အလင်း ပွင့်ခဲ့ရပါပြီ။
သမီး ဗောက်ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်မှာ အနည်းဆုံး၅နှစ်လောက်ရှိပါမည်။
ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတုန်းက သာမန်ဗောက်ဟုထင်ပြီး ဗောက်ပျောက်ခေါင်းလျှော်ရည် သုံးခဲ့ပါသည် ။
သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် ဗောက်ကဲ့သို့အချပ်များအရမ်းကြီးလာပြီး ခေါင်းလည်းနာနေပါသည်။
ဆံပင်ကောက်ခြင်း ဆေးဆိုးခြင်း ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်းများ မလုပ်ပါ။
အရေပြားဆရာဝန်ပြကြည့်ပါသည်။စစ်ဆေးခိုင်းတာမှန်သမျှ စစ်ဆေးပြီး ကုသမှုခံယူပါသည်။သို့သော် အထူးသလည်ပျောက်ကင်းခြင်းမရှိပါ။ဘာရောဂါဟုလည်း မပြောပါ။ဆေးသာပြောင်းပြောင်းသွားသည် အထူးတလည် သက်သာခြင်းမရှိပါ။
သို့နှင့်၂လ၃လခန့် ကုပြီး အခြားအရေပြားဆရာဝန် ထံပြောင်းကကြည့်ပါသည်။
ပျောက်ကင်းတာ များသည်ဆိုသောကြောင့်ပါ။သမီးကို ဆေးထိုးဆေးစား ဆေးလိမ်းခိုင်းပါသည်။ဆေးစစ်ခိုင်းပါသည်။သမီးရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်သလားမေးတော့ ပျောက်အောင်ကုပေးမယ်။ဆေးချိန်းပုံမှန်လာ ဟု။
သို့နှင့် ၂လခန့်ကြာသောအခါ မနေနိုင်တော့သဖြင့် သမီးရောဂါက ဘာရောဂါလဲ ဟုမေးသောအခါမှ psoriasis ဟု ။ပျောက်ကင်းမယ် ဆေးချိန်းပုံမှန်လာ ဟုသာ ။
ကြာတော့အထူးသလည် ပျောက်ကင်းခြင်း ထူးခြားကောင်းမွန်လာခြင်း မရှိသောကြောင့် မသွားပြတော့ပါ။
တခါက ဆရာဘာဆေးထိုးလည်းဟုမေးသောအခါ steroid ဟုသာ ဆေးတော်တော်များများက ဗူးသေးသေးပြောင်းထည့် ပေးသောကြောင့် ဘာဆေးဟု သေသေချာချာမသိရပါ။
မေးလျှင် အရမ်းမကြိုက်ပါ။ပုံမှန်လာ ဟုသာ။
ဆရာမကြီးရှင့် မိန်းကလေးတယောက်အနေဖြင့် ခေါင်းမလျှော်ဘူးလား။ဟိုလိုလုပ် သည်လိုလုပ်ပါလား ကြည့်ရတောင်အူယားတယ်ဟု ပြောခံရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဆရာမကြီး ဂရုဏာရှေ့ထားပြီး psoriasis ဆိုသည်မှာ ပျောက်ကင်းမည့်ရောဂါမျိုးလား။
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြပေးလျှင် အထူးဝမ်းမြောက်မိမှာရှင်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုရောဂါကို ဖြစ်သူမှသာ နားလည်မည်ထင်ပါသည်။
အချို့ လူများလည်း ကူးစက်ရောဂါလိုလို ဘာလိုလိုထင်ပြီး ရှောင်သွားချင်ကြပါသည်။
သမီးလည်းဆရာဝန်မေးပါသည်။ကူးစက်တတ်သလားဟု မဟုတ်ဆိုသောကြောင့် မြင်သူတိုင်း ပြောသူတိုင်းကို လိုက်ရှင်းပြနေရပါသည်။ ရှက်လည်း အထူးရှက်မိပါသည်။
သို့သော် ထိုရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆရာမကြီး သနားသောအားဖြင့် ရောဂါအကြောင်းရင်း ကုသနည်းကိ အကျယ်တဝင့်ပြောပြစေချင်မိပါသည်။ "
အမှားပါလျှင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
Psoriasis ဆိုု တာ auto immune disease တစ်ခုု ဖြစ် ပါ တယ်။
အရေပြား မှ ကလာပ်စည်း တွေ ဟာ မြန်မြန် စုုပုုံ တက် လာ ပြီး၊ အရေ ဖတ် ကွာ သလိုု ဖြစ် ပါ တယ်။ နောက် ပြီး ယောင်ကိုုင်း တာ ပါ ဖြစ် တတ် တာ မိုု့ ၊ ဖြစ် တဲ့ နေ ရာ မှာ နာ ကျင်နေ ခြင်း၊ ပူ နေ ခြင်း၊ နီ နေ ခြင်း တိုု့ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။
နီနေ ပြီး ထူ နေ တဲ့ အကွက် တွေ ဟာ ဖြူ နေ တဲ့ အရေပြား အထူ ဟာ ဝန်းရံ ထား ပါ တယ်။
အများဆုုံး ဖြစ် တတ် တဲ့ နေ ရာ တွေ က တော့ ---
ဦး ရေ scalp
ကျောကုုန်း အောက် နား တိုု့ ဖြစ် ပါ တယ်။
တစ်ခါ တရံ၊ လက်သည်း၊ ခြေသည်း၊ လိင်အင်္ဂါ ၊ နှင့် ပါး စောင် အတွင်း မှာ လည်း ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။
ဒီ ရောဂါ ရှိ သူ တွေ ဟာ၊ စိတ်ဓာတ် ကျ ဆင်း ခြင်း၊ မိမိ ကိုုယ် ကိုု ယုုံကြည် မှု လျော့ ပါး လာ ခြင်း၊ လူ တော သူ တော မသွား ချင် ခြင်း နဲ့ အလုုပ် လုုပ် တဲ့ နေ ရာ မှာ လည်း ပြဿနာ ပေါ် တတ် ပါ တယ်။
ကူးစက် တတ် သော ရောဂါ မဟုုတ် ပါ။
အချို့ လူ တွေ ကျ တော့ လဲ၊ ဗီဇ ကြောင့် ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။
အဖေ၊ အမေ မှာ ရှိ ရင် သားသမီး မှာ လဲ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။
ဖြစ် ပုုံ -----
ခန္ဓာကိုုယ် ခုုခံအား တစ်ခုု ဖြစ် တဲ့ T cell ဟာ ရောဂါ တွေ မဝင် အောင် ကာ ကွယ် တဲ့ ကလာပ် စည်း ဖြစ် ပါ တယ်။
အစာလမ်းကြောင်း မကျန်းမာ တဲ့ အခါ ဖော်ပြ ပါ ကလာပ်စည်း တွေ ဟာ ကစဥ့် ကလျား ဖြစ် ပြီး ခန္ဓာကိုုယ် အချို့ နေ ရာ တွေ မှာ ယောင် ကိုုင်း ခြင်း တွေ ဖြစ် စေ ပြီး ၊ အရေပြား ကလာပ်စည်း တွေ ကိုု ကစဥ့် ကလျား ဖြစ် စေ တတ် ပါ တယ်။
သဘာဝ နည်း များ ကိုု စမ်းသပ် ကြည့် နိုုင် ပါ တယ်။
၁. တစောင်း လက်ပတ် gel ဟာ အယောင် ကျ စေ တယ်၊ ယား တာ သက် သာ စေ ပါ တယ်။
၂. Organic apple cider vinegar
ယား တာ သက် သာ စေ တယ် လိုု့ ဆိုု ပါ တယ်။
သိုု့ ပါ သော် လည်း ၊ အကယ်၍ အရေ ပြား ဟာ ကုုတ် ထား လိုု့ ပွင့် နေ တဲ့ နေ ရာ ရှိ မယ် ဆိုု ရင် စပ် ပါ လိမ့် မယ်။
ရေ နဲ့ ဆ တူ ရော ပြီး သုုံး သင့် ပါ တယ်။
ချောက် သွား ပြီ ဆိုု ရင် ခေါင်း လျှော် လိုုက် လိုု့ ရ ပါ တယ်။
၃. ဆနွင်း ကိုု အဆီ ထဲ မှာ ဖျော် သောက် ပါ။
၄. Vitamin D 10,000IU and super k one daily သောက် ပါ။
၅. ကျွန်မ အရင် က ရေး ပေး ထား တဲ့ အူ ကျန်းမာရေး ကိုု ဖတ် ပြီး လိုုက် နာ ပါ။
နွားနိုု့၊ ဂျုံ ပစ္စည်း အား လုုံး၊ ပေါင်မုုန့်၊ ရွှေကြည် ရှောင် ပါ
ပြောင်းဖူး ရှောင် ပါ။
ခရမ်းချဉ် သီး၊ အာလူး၊ ခရမ်းသီး ရှောင် နိုုင် ရင် ကောင်း ပါ တယ်။
probiotics 20 -30 billion count သောက် ပါ
apple cider vinegar 1-2 teaspoon in 8 oz of water သောက် ပါ။
digestive enzymes အစာ ချေ ဆေး တတ် နိုုင် ရင် သောက် ပါ။
အရိုုးပြုပ်ရေ သောက် ပါ။
အလှမ်း မီ မယ် ဆိုု ရင် L glutamine powder ဝယ် သောက် ပါ။ သူ က အူ အတွင်း နံရံ ကိုု ပြန် လည် ပြု ပြင် ပေး တတ် ပါ တယ်။
မကြေညက် နိုုင် တဲ့ အစာ တွေ ကိုု စား မယ် ဆိုု ရင် အရေပြား ရောဂါ မျိုးစုုံ ဖြစ် တတ် တာ မိုု့ သတိ ထား စေ ချင် ပါ တယ်။
အမြန် ဆုုံး ပြန် ကောင်းလာ ပါ စေ လိုု့ ဆုု တောင်း ပေး လိုုက် ပါ တယ်။